के रियालिटी शोमा देखाइने कुरा वास्तविक हुन् ?
आजभोलि टिभिमा रियालिटी शो को निकै ठूलो क्रेज छ । नेपालमा नेपाल आइडल र भ्वासइस अफ नेपाल नामक दुई सांगितिक रियालिटी शो चलिरहेको छ र यसमा मानिसहरुको विशेष रुची रहेको छ । यसअघि नाच सम्बन्धी रियालिटी शो बुगि बुगी पनि चर्चामा थियो ।
यी रियालिटी शोहरुमा निकै रमाइलो र मसला हुने गरेको छ । जसका कारण केही व्यक्ति रातारात चर्चामा आउने गरेका छन् भने दर्शकले पनि यसलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
तर के वास्तवमा नै रियालिटी शोको नाममा वास्तविकता देखाइन्छ या फेरि सोच विचार गरेर योजनावद्ध रुपमा देखाइन्छ ? कयौं पटक यस्ता प्रश्नहरु आम दर्शकहरुमा हुने गरेको हुन्छ ।
रियालिटी शोहरुमा गरिने यस्ता हर्कतको वास्तविकता के हो ?
रियालिटी शो मा वास्तविकताको कुनै वास्ता हुँदैन भन्ने हुँदैन तर यसको पछाडि एक वास्तविकता पनि हुन्छ कि च्यानलवाला तथा यो शोवालाको उदेश्य मात्र पैसा कमाउने हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले शोमा निकै अनौठा र आक्रमकता युक्त विषय प्रस्तुत गर्छन् ।
रियालिटी शोहरुमा आफ्नो कार्यक्रम हेर्दा दर्शक कसरी आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिइएको हुन्छ । त्यसका लागि केही पात्रहरु चयन गरेर मजाकका लागि ल्याइने गरिएको छ । जस्तो नेपाल आइडलमा यस वर्ष नरेस पातली, काउली बुडी लगातय चर्चामा रहे । नेपाल आइडलको अडिसनमा आउने केही अनुहार र पात्रहरु मजाकका लागि र दर्शकलाई आफ्नो शो तर्फ आकर्षित गर्न ल्याइन्छ ।
भारतमा गाउने र नाच्ने शोमा कयौं पटक यस्तो समाचार आउने गरेको छ कि जब जजले प्रतिभा वा प्रस्तुती कर्तालाई नराम्रो प्रदर्शन गरेको भन्दै गाली गर्छन् र यसले उनको दिल दिमाग तथा शरीरमा नराम्रो प्रभाव पर्छ जसका कारण कुनै कुनै प्रतियोगीलाई त अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । तर यस्तो क्रियाकलापको पछाडि प्रश्न उठ्छ कि प्रतियोगिको आत्मविश्वास बढाउनको सट्टा जजले उनीहरुको बेइजत किन गर्छन् ? के उनीहरुलाई यो पहिला नै सिकाइएको हुन्छ ? के यो सब स्क्रिप्टेड हुन्छ ?
हरेक शोको आफ्नो एक अलग फर्म्याट हुन्छ । यस्तो एक शो भारतमा निकै चर्चित छ । बिग बोस नाम गरेको शोमा केही महिना सम्म मानिस एक साथ रहन्छन् जसलाई त्यसबीचमा बाहिरी दुनियाँबाट कुनै पनि सम्पर्कमा बस्न दिँइदैन । यस्तो शोको उदेश्य हुन्छ कि धेरै विवाद सिर्जना गर्नु र अभद्रता देखाउनु जसले गर्दा दर्शकको क्रेज बढ्छ ।
तर यस्तो शोमा पनि कयौं पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि के मानिसले निजी जिन्दगीमा पनि यस्तो व्यवहार गर्छन् या उनीहरुलाई शो मा यस्तो व्यवहार गर्न पैसा दिइन्छ वा सिकाइन्छ ?
कयौं पटक बिग बोसमा कयौं सेलिब्रेटिका अफेयर भएको छ तर शो पूरा भएपछि निजी जिन्दगीमा उनीहरु एक अर्कासँग अलग नै हुन्छन् । यस्तो शंका उत्पन्न हुन्छ कि शो को टिआरपी बढायउनका लागि यस्तो गर्न लगाइन्छ, जो शो सकिएसँगै सकिन्छ । यस्तो शोमा कयौं पटक त सेलिब्रेटिको विवाह सम्म गरिन्छ जसका कारण मानिसहरु शो हेर्न रुची राखुन् ।
बिग बोसको एक सीजनमा एक जोडिलाई शो मा विवाह गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँको अफर गरिएको थियो । यदी यी शोमा वास्तविकता देखाइने भए जोडीहरु किन साथ बस्दैनन् ? यो सबै दर्शकलाई आफ्नो शो तर्फ आकर्षित गर्नका लागि गरिएका हत्कण्डा हुन् । जसलाई आम दर्शकले ख्याल गर्दैनन् र थाहा पाउँदैनन् । मात्र त्यो विषयको चर्चामा व्यस्त हुन्छन् जसका कारण टिभी र रियालिटी शोको व्यापारमा उल्लेख्य बृद्धि हुने गरेको छ ।